Toekarena - Nahazo fiofanana momban’ny zony ireo mpisehatra amin’ny varotra
Toekarena – Nahazo fiofanana momban’ny zony ireo mpisehatra amin’ny varotra
Publié novembre 18, 2019 par Book News
Tontosa soa amantsara teny amin’ny CCIA Antaninarenina ny herinandro lasa teo ny fampiofanana ireo mpisehatra rehetra mikasika ny varotra.
Fampiofanana ireo mpisehatra amin’ny varotra
Notanterahina ny 14 ka hatramin’ny 15 Novambra lasa teo teny amin’ny CCIA Antaninarenina ny fampiofanana ireo mpisehatra rehetra mikasika ny varotra izay ahitana ny mpanafatra sy mpamokatra entana, ireo mpandraharaha ara-indostrialy, ny Antenimieran’ny Varotra, ny mpisolavava sy ireo mpisehatra maro samihafa.
« Mbola maro ireo mpisehatra tsy misitraka ny zo momban’ny fepetra fiarovana. Vokatr’izany dia mateti-pitranga ny fitarainana apetrak’ireo voakasika ireo mikasika ny fitobahan’ny entana sy ny fifaninanana tsy ara-dalàna eto amitsika, »
hoy ny Tale jeneralin’ny « Autorité nationale chargée des mesures correctives commerciales » na ny ANMCC, Barthelemy.
Barthelemy, Tale jeneralin’ny ANMCC cc : Toria Dimbiniaina
Misy araka izany ny fampifandraisana ireo mianjady amin’ny indostria ka hanokafana fanadihadiana ny momba izany. Noho izany dia nisy ny fampiofanana ireo mpisehatra rehetra mikasika ny varotra tizay ahitana ny mpanafatra sy mpamokatra entana, ireo mpandraharaha ara-indostrialy, ny Antenimieran’ny Varotra, ny mpisolavava sy ireo maro samihafa teny amin’ny Tranoben’ny Varotra sy ny Indostria teny Antaninarenina ny Tanjona ny ahafahan’ireo voakasika ireo misitraka ny zo momba ny fepetra fiarovana.
« Manam-pahaizana manokana avy any Genève no nitondra io fiofanana io”,
araka ny fanazavana nentin’ny Tale jeneralin’ny ANMCC.
Ny Ministeran’ny Varotra, ny Indostria sy ny Asa Tanana amin’ny alalan’ny ANMCC kosa no niandraikitra ny fampiofanana.